How to use your phone from laptop APK Download for Android
ပင်မစာမျက်နှာ » ဘ‌‌လော့ခ် » လက်တော့ကနေသင့်ရဲ့ဖုန်းကိုသုံးစွဲဖို့ကိုဘယ်လို
Android ထုတ်ကုန်အလွန်အသုံးဝင်သောဖြစ်ကြပြီးအဖြစ်ကောင်းစွာဖျော်ဖြေရေးကိုဆက်ကပ်။ သငျသညျအလုပျဖို့ကြိုးစားနေကြသောအခါသို့သော်ကြောင့်အစဉ်အဆက်အဆိုးဆုံးအာရုံပြံ့လှငျ့တစျခုဖွစျဖို့ထေူ၏။ သင်သည်သင်၏ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ် laptop ကိုအလုပ်လုပ်နေကြသည်နှင့်သင်စာသားမက်ဆေ့ခ်ျကိုညွှန်ပြသင့်ရဲ့ Android device ကို ping ရဲ့စကားကိုနားထောငျလြှငျသငျသငျသညျအချိန်မရွေးမကြာမီလုပ်ကိုင်ဖို့ပြန်ရမယ့်ကြသည်မဟုတ်သိကြ၏။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ဖုန်းကိုကောက်ကသော့ဖွင့်, စာသားပြန်လာ, သင့်ရဲ့ဖုန်းကို lock နှင့်နောက်ကျောကိုသင့်ကွန်ပျူတာရဖို့လည်းရှည်လျားတာဝန်ဖြစ်ပါတယ်။ အခွင့်အလမ်းတွေကိုသင်ချက်ချင်းနီးပါးအခြား ping ရဲ့စကားကိုနားထောင်မည်များမှာ!
ဒီဖို့အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်းသင့်ရဲ့ Laptop ကိုသို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာသို့သင့်ရဲ့ဖုန်းကို mirror အဲဒီမှာကနေထိန်းချုပ်ဖို့ဖြစ်တယ်။ ဒါဟာမသာကီးဘုတ်မှတဆင့်စာပို့ဖို့ပိုပြီးလွယ်ကူဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့သင်တဦးတည်းစက်ကိရိယာနှင့်တဦးတည်း interface မှတစ်ဆင့်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ဒီ option နှင့်အတူ, သင်သည်သင်၏ဖုန်းကိုထင်ဟပ်နေတဲ့ဆက်ကပ်အပ်နှံပြတင်းပေါက်နှင့်သင်၏ Android ရဲ့ UI ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာကီးဘုတ်နဲ့မောက်စ် input ကိုနှစ်ဦးစလုံးလက်ခံကတည်းကကချောမွေ့စွာအတွေ့အကြုံကိုပေးထားပါတယ်။
လက်တော့ကနေသင့်ရဲ့ဖုန်းကိုသုံးစွဲဖို့ကိုဘယ်လို - စတင်
စတင်အဘို့, သင်က Windows က PC နဲ့ 5.0 Lollipop သို့မဟုတ်မြင့်မားသောအပေါ်အပြေးတစ်ဦးက Android device ကိုရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ သင်တို့သည်လည်းတစ်ဦးကို USB data တွေကို cable ကိုလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်သင်၏ဖုန်းကိုထင်ဟပ်၏မျိုးစုံနည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်။ Microsoft account တစ်ခုကနေတစ်ဆင့် app တစ်ခုနှင့်အခြားပတျသကျတဦးတည်း - ဒီမှာနည်းလမ်းနှစ်ခုစူးစမ်းလေ့လာကြပါစို့။
အဆိုပါ App ကို Way ကို
ပထမဦးစွာ, သင်သည်သင်၏ကိရိယာပေါ်တွင် "ရေးသားသူ Options ကို" enable ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သင့်အနေဖြင့် "က USB Debugging" option ကိုအပေါ်ကိုပြောင်းနိုင်ရန်အတွက်ဒီလိုလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
ပြီးတာနဲ့ပြုသောအမှု, ရှေ့ဆက်သွားနှင့်သင့်ရဲ့ Android device ကိုနှင့်သင့် Windows PC မှာပေါ်အဖော် app ကိုပေါ် ApowerMirror app ကို install လုပ်ပါ။ သင်အလွယ်တကူ Google Play စတိုး၌ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
သင်တစ်ဦးကို USB cable ကိုကနေတဆင့်စနစ်ရန်သင့်ဖုန်းကိုချိတ်ဆက်ဖို့သတိပေးခံရလိမ့်မည်။ သငျသညျလုပ်ပြီးတာနဲ့သင်အလိုရှိပါလျှင်, သင်, mirroring အကြောင်းကြားစာကို enable နိုင်ပါတယ်။ ဒီ feature သင်၏ Windows desktop ပေါ်မှာဏသင့်ရဲ့ device ကိုအပေါ်အသိပေးချက်များကိုဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနောက်, သင်သည်သင်၏အန်းဒရွိုက်ဖုန်းမျက်နှာပြင်ဖေါ်ပြခြင်း, app ကို၏အဓိက interface ကိုမြင်လိမ့်မည်။ ဒါမှမဟုတ်ကိုနှိပ်ပါမထိမျက်နှာပြင်နှင့်သင့် android device နှင့်အတူအလုပ်လုပ်နေကြလျှင်အဖြစ်အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ သင်ပင်ရှုခင်း mode မှာပွင့်လင်း, screenshots များ ယူ. , ပင်ဂိမ်းများကိုဆော့ကစားနိုငျပါသညျ!
သင့်ရဲ့ PC ကိုမှတဆင့်ရန်သင့်ဖုန်းကိုချိတ်ဆက်ဖို့ Microsoft က သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် account ကိုဖွင့်ရှိ "Settings" ။ သငျသညျထိုအရပ်၌ option ကို "ဖုန်း" ကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ။
သငျသညျပြီးသားလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြသည်မဟုတ်ခဲ့လျှင်, သင်၏ Microsoft အကောင့်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြသည်။ "တစ်ဦးဖုန်း Add on" ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်သင်၏ဖုန်းအရေအတွက်သော့ချက်မှရပါလိမ့်မယ်။ ပြီးတာနဲ့ပြုသောအမှု, သင်မကြာမီ Microsoft က Edge install လုပ်မယ့် link ကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။ သင် connection ကိုထူထောင်ချင်လျှင်, သင် Edge တပ်ဆင်ရန်နှင့်နောက်တဖန်သင်၏ Microsoft အကောင့်ကိုလက်မှတ်ထိုးရန်ရပါလိမ့်မယ်။
သင့်ရဲ့ Laptop ကိုသို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာကို Restart ချလိုက်ပါ။ သငျသညျယခုသင်၏ဖုန်းက Settings ထဲမှာဖုန်းစာမျက်နှာအောက်မှာနှင့်ဆက်စပ်ပေါ်လာမြင်လိမ့်မည်။
အခုတော့သင်သည်သင်၏ laptop ကိုကနေတဆင့်သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုသုံးစွဲဖို့ဘယ်လိုသိသော, သငျသညျရှိနိုင်ပါသည်ပျော်ရွှင်စရာန့်အသတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆက်သွယ်မှုထူထောင်ရန်နှင့်အတူကံကောင်းပါစေ
google Install ...
Braina PC ကိုအဝေးထိန်း ...